Firafitra Bulldozer firafitra ara-dalàna - Mpanamboatra Bulldozer ara-dalàna China, mpamatsy
Struktur normal Bulldozer TYS230-3
TY230-3 bulldozer dia mihantona semi-hentitra, famindrana hydraulic, bulldozer karazana lalana voafehy. Planeta, famindrana angovo azo avy amin'ny Unilever.
TS160-3 bulldozer dia mihantona semi-hentitra, fiara mivantana, fanaraha-maso fanamoriana. Ny bulldozer karazana làlam-by mifehy ny lasantsy miaraka amin'ny karazan-tsolika dia nanamafy ny fihazonana azy ireo, fifandimbiasana tsy tapaka, fiovan'ny tanany mpivady, tsorakazo roa vita amin'ny mekanika.
TY320-3 bulldozer dia mihantona semi-henjana, famindrana hydraulic, bulldozer karazana lalana voafehy. Planeta, famindrana angovo azo avy amin'ny Unilever.
TY160-3 bulldozer dia somary henjana, fanodinam-pahefana, fanaraha-maso ampiasana herinaratra, fanaraha-maso mifehy hydraulic, miaraka amina boaty planeta planetaly tokana.
Struktur normal Bulldozer TY220
TY220 bulldozer dia mihantona semi-hentitra, famindrana hydraulic, bulldozer karazana lalana mifehy hydraulic. Planeta, famindrana angovo azo avy amin'ny Unilever.